Nahoana no Mifidiana Us? - Shandong Chenan milina Co., Ltd
1.Professional R & D ekipa: ny karazana matihanina injeniera, afaka planina sy mamokatra 5 mpiray cnc milina, RV foibe fikarakarana ankapobeny kobany, lehibe bobongolo cnc foibe sy ireo fomba amam-panao farany ambony-fitaovana.
2.Powerful machining fahaiza-manao: Tsy manana USA Hass mitsangana Machining Center, Etazonia Hass marindrano Machining Center, Taiwan AWEA Gantry-Face dimy Machining Center, mankaleo karazana milina sy ny fikosoham-bary milina. Mihoatra ny 20 taona machining traikefa mba hahazoana antoka ny kalitao sy ny fametrahana mazava tsara ny milina rehetra piesy;
Fitaovana fitiliana 3.Advanced: manafatra UK izahay RENISHAW marika tamin'ny laser interferometer / USA mpitarika mandrindra marika mirefy milina / UK RENISHAW marika ballbar rafitra, ny Laser autocollimator / Optical sisiny izay nahita miantso habetsahan'ny, dial famantarana / toradroa Efajoro / marbra toradroa boaty ary manao insulation fanoherana text / tany fanoherana fitsapana / tsindry fitsapana, mba hahazoana antoka ny milina tonga lafatra ny zava-bitany eo anatrehan'i lahateny.
4.24 ora aterineto rehefa avy-fanompoana sy ny Filaharam-fanompoana taorian'ny ekipa, mba hamaliana fanontaniana ara-potoana ny mpanjifa.